Global Warming!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Global Warming!!
Posted by politicalview on Jul 20, 2010 in News, World News |0comments
ယင်းကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအပူချိန်တိုင်းသာမှုအား လွန်ခဲ့သည့် ၁၈၈၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မှတ်တမ်း ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်သည် အပူပြင်းဆုံးနှစ်ဟု National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) မှ လွန်ခဲ့သည့် ကျာသပတေးနေ့ (ဇူလိုင် ၁၅ ရက်) က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပျမ်းမျအပူရှိန်ထက် ပို၍ ပူပြင်းသည့်ဒေသများမှာ ကမ္ဘာတ၀န်းလုံးနီးပါးဖြစ်ပြီး၊ ပီရူးနိုင်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်များနှင့် အရှတိုက် အရှေ့ဘက် ပိုင်းနှင့် အနောက်ဘက်ပိုင်းဒေသများ အစရှိသည့်နေရာဒေသများတွင် ပိုမိုလွန်ကဲစွာ ပူပြင်းနေသည်။
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုဖေါက်ပြန်မှုများဖြစ်ပွားရာတွင် တချို့နေရာ၌ စံချိန်တင် ပူပြင်းနေချိန်တွင် စပိန်နိုင်ငံကမူ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းက ယခုနှစ်ဇွန်လသည် အအေးဆုံးလ စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကွယ်ဇိုးပြည်နယ် (Quizhou)၊ စကင်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အနောက်မြောက်ဒေသရှိပြည်နယ်များတွင် အအေးဓာတ် ပျမ်းမျထက် ပိုအေးသည်ဟု NOAA မှ ဖေါ်ပြထားသည်။